प्रचण्डकाे उम्मेदवारी बाम गठबन्धन मात्र हाेईन एकताकाे लागि पनि काेशेढुङगा साबित हाेस् ! – Saurahaonline.com
प्रचण्डकाे उम्मेदवारी बाम गठबन्धन मात्र हाेईन एकताकाे लागि पनि काेशेढुङगा साबित हाेस् !
सुन्दर डल्लाकाेटी क. विवश
मुग्लिनकाे भत्तकिएकाे बाटाेकाे बिचमा अाई नपुग्दै खबर अाउछँ अाज बाम गठबन्धन बन्दैछ ! जस गठबन्धनमा कम्युनिस्ट त्यागेका डाक्टर साहेब पनि अाउदैछन् !
अपत्यारिलाे जस्तो लाग्याे डाक्टर साहेब याे गठबन्धनमा अाउनु अनि दिनरात प्रचण्ड र माअाेवादी उखान लगाई लगाई गाली गरेर दिनचर्या बिताउने एमालेका अध्यक्ष केपी अाेली तालमेल र एकताकाे लागि तयार हुनु ! राजनीति वृत्तमा समयले कसरी काेल्टाे फेर्छ थाहा हुदैन रहेछ ! तर म जस्तो माअाेवादी अान्दोलनमा लागेका ६० % युवाहरुमा अझै अनेकौं प्रश्नहरु छन् पाटी प्रति !
१) के एमाले सच्चिन तयार हुन्छन् त ?
२) के एमाले तालमेल मात्र हाेईन एकताकाे लागि पुर्ण बिसस्त छन् त ?
३)के नेताहरु सत्ताकाे लागि हाेईन् देशकाे समृद्धिकाे लागि बफादार छन् त ?
४)भाेली यदि एकता भाडे त्यसकाे जिम्मेवारी एमाले लिन तयार हुन्छन् त ?
अनेकाै प्रश्नहरु हामी युवाहरुकाे मनमस्तिकमा खेलेका छन् ! केही दिन अगाडि बाम गठबन्धनमा अाएका डाक्टर साहेब १५ सिट देखि ११ सिट नपाउदा गठबन्धन ताेडेर काङ्ग्रेस सँग २ सिट पाउदा पनि किन तयार भए ? अाखिरी यहीँ चरित्र भाेली केपी अाेलीले नगर्ला भन्न सकिदैन ! किनभने डाक्टर साहेब केपी अाेली मार्फत बाम गठबन्धनमा सामेल हुन अाएका थिए !
कमरेड प्रचण्डले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउनकाे लागि शान्ति प्रक्रियामा अाए पश्चात् धेरै चाेटी प्रयास गरे ,तर ए वा उ बाहानामा एमाले भाडे ! चाहे त्याे पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ताका हाेस् वा नाकाबन्दीकाे बेला केपी अाेलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला ! अझ पनि एमालेले पुर्ण संविधानलाई स्विकार गरेका छैनन् ! चाहे त्याे गणतन्त्रलाई स्विकार्ने तर्फ हाेस् वा संघियता बारे !
नेपालकाे ९,१० महिने सरकारले सबै जनता बाक्क मानेकाछन् ! कम्तीमा ५ बर्षे स्थाई सरकार खाेजेकाे छ याे देशले ! याे ६० बर्ष याे देशका नेताहरुले सिहंदरबारमा फाेटाे टाँस्ने भन्दा अरु केही काम गरेनन् ! ६५ प्रतिशत कम्युनिस्टहरुले याे देशमा समृद्धिकाे लागि अावश्यक छ यसमा कुनै गुन्जाएस छैन् ! कम्युनिस्ट पाटीकाे स्थापना काल देखि यता हेराै भने कम्युनिस्टहरु जुट भन्दामा धेरै केन्द्रीत भए ! अझ पनि एउटा प्रश्न मनमा खेलेकाे छ एमाले माअाेवादलाई मान्दैनन् ! के भाेली यहीँ बिषयलाई अतिरञ्जित नबनाउला भन्न सकिन्न !
पाटी भित्र माैलाएरकाे नातावाद,क्षेत्रियतावाद,भेगियवाद अनेकौं प्रवृत्ति देख्दा अनि कमरेड प्रचण्डले सम्बाेधनले भन्नुभएको एक हरफ सार्है मुनासिफ लाग्याे ! “मैले समाजवादमा जानकाे लागि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन समुन्द्रमा हाेमिदिए , जाे पाैडी खेल्न सक्छ उ तर्छ , तर्न नसक्ने डुब्छ वा डिलमा बसेर हेर्छन्” !
याे भनाइले के प्रश्ट पार्छ भने अब क्षमताकाे मुल्यांकन हुन्छ ! टिका प्रवृत्ति ,नातावाद,क्षेत्रियतावादकाे अन्तय हुने देखिन्छ ! लाेकतान्त्रीक प्रतिस्पर्धा अनुसार जान्छ कम्युनिस्ट एकता पश्चात् !
कमरेड प्रचण्डकाे चितवनमा अागमन सँगै चितवन पाटीमा हाेस् वा वाम गठबन्धनले एउटा नयाँ गति लिएकाे छ ! हामीबाट फुटेर गएका विप्लव समुह हाेस् वा नयाँ शक्ति हाेस् वा राप्रपाका प्रभावसाली नेता बद्री तिमल्सिनाका पुरै जिल्ला कमिटी सबै माअाेवादी केन्द्रमा समाहित भएका छन् ! कमरेड प्रचण्डकाे चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा जित सुनिश्चित भई सकेकाेछ ! कमरेड प्रचण्डले केहीदिन अगाडि भने बमोजिम म चितवन र चितवन पाटी बनाउन अाएकाे हु ! यदि म यहाँ असफल भए पुरै देशमा असफल हुन्छु त्यसैले चितवनबाट उम्मेदवारी दिएकाे हु भन्नुभएकाे थियाे ! हामी युवाहरु पनि बिसस्त छाै कि चितवनमा भएकाे एकात्मक प्रवृत्ति , चापुलिसि गनेकाे पदाेउन्र्ती,पुर्वी र पश्चिमी छुट्टाउने उपनेविशकतावादी साेच भएकाहरुकाे निराकरण गर्नुहुनेछ भन्नेमा पुर्ण बिसस्तछाै !
कमरेड प्रचण्ड , कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे,कमरेड कृष्ण भक्त पाेखरेलकाे उम्मेदवारीले चितवनलाई कम्युनिस्टमय बनाउने कुरा त निश्चित छ ! तर निर्वाचन पश्चात् यदि कम्युनिस्ट एकता भाड्ने कुनै षड्यन्त्र पाटी भित्रबाट हाेस् वा बाहिरी शक्तिबाट भएमा एक जुट भई कम्युनिस्ट चितवनका उम्मेदवारहरुले कुनै हालत एकता गर्न मुख्य भुमिका खेल्नु हुनेछ शुभकामना अग्रिम विजय अनि एकताकाे !